How to get back your Lost Village (COC) - Min Oaker
Android နည်းပညာ How to get back your Lost Village (COC)
How to get back your Lost Village (COC)
by Min Oaker on 10:08 PM in Android နည်းပညာ
Credit >> Ko Htike
အမှန်တိုင်း ကျွန်တော် ဝန်ခံရရင် ကျွန်တော့ အကောင့်က GMAIL မေ့သွားတဲ့ အကောင့်ပါ ...
ဖုန်းကလည်း factorydata reset ချလိုက်တော့ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးး ...
ကျွန်တော် သိတာဆိုလို့ coc name /clan name/start play date(စဆော့တဲ့ လ နဲ့ နှစ် )/live in country & region (နေတဲ့နေရပ်လိပ်စာ) / devices (သုံးတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား) ... ok ပါပြီ .....
သူလိုတာတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုက်သွားပါတဟ်..တခုပါပဲ ကျွန်တော် သွားတဲ့ပုံစံက Lost gmail အနေ
နဲ့သွားတာဆိုတော့ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ မသိဘူးးဗျ ကျွန်တော်တော့ မေ့သွားလို့ဝင်မဆော့ဖြစ်တာ3ပတ်မြောက်လောက်မှ mail စတင်ဖြစ်တာပါ ..
ပထမဆုံး အပ်ါက အခြက်အလက်တွေစုံပြီဆို coc game ရဲ့ ညာဘက် setting(စက်သွားပုံ) ကိုတချက်နိုပ်ပါ Help and
support ကိုရွေးပါ ...
Lost Village ကို ရွေးပါ
I lost my village ! How do i get it back? ကို နိုပ်ပါ
အဲ့အထဲက မှ အပေါ်ညာဘက်တွင် massage ပုံ အကွက် လေးကို တချက်နိုပ်ပါ ..
အဲ့နောက်အဆင့်တွင် အပေါ်ညာဘက်တွင် ဓါတ်ပုံ အပေါင်းလေးကို နိုပ်ပြီးကို့ clan name ပါတဲ့ ပုံကို ss ရိုက်ထားတဲ့ တပုံ ထည့်ပါ ..
အပေါ်အကွက်ထဲကျယ် ထဲတွင် အကောင့်ပြောက်ရခြင်း Clan နာမည်နဲံ အကောင့်နာမည် TH Level နှင့် Townhell Level တွေကို english လို ဖြီးပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီး အဲ့အောက်က အကွက်ထဲတွင် ကို့ coc name ထည့်ပေးပါ
အာက်ဆုံးက email (optional) နေရာတွင် ကို နောက်ချိန်းချင်သည့် mail ထည့်ပါ (တခြားgmail ထည့်လည်းရပါတယ်
ဒီအတိုင်းပြီးရင် အခုနကထည့်ပေးထားတဲ့ gmail ထဲ super cell က စာ ရောက်နေပါလိမိ့မယ်
အဲ့ကနေ အခုနက ရေးထားတဲ့အတိုင်း အကောင့်ပြောက်ရခြင်း clan နာမည်နဲံ အကောင့်နာမည်
TH level နှင့် Townhell level တွေကို english လို ဖြီးပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ ..
နာက်တခေါက် စာပြန်လာ တဲ့အခါကျ သင့်ကို သေချာမေးပါလိမ့်မယ် coc name /clan name/start play date(စဆော့တဲ့ လ နဲ့ နှစ် )/live in country & region (နေတဲ့နေရပ်လိပ်စာ) / devices (သုံးတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား) အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပေးပြီးရင်တော့ နောက်တခေါက် super cell က ပြန်လာတဲ့ ပြန်စာတွင် သင့် အကောင့် info တွေအကုန်မှန်ပါက ဝင်ဖို့ code တခုပို့ပေးပါလိမ့်မယ် အဲ့code ကို မှတ်၍သင်ချိန်းခြင်တဲ့ Gmail နဲ့
coc မှာ အကောင့် setting ပေါ်တဲ့ထိ ဝင်ဆော့ပါ ....
(အသစ်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းတော့ အချိန်ပေးရပါတယ် ကျွန်တော်က အဲ့နေရာမှာမသိပဲ ဆော့လက်စ level5အကောင့်နဲ့ဝင်မိလို့ အဲ့အကောင့်ပျက်သွားပါတယ် ) ပြီး setting နိုပ်ပြီး အပေါ်သုံးကွက်ထဲက linkadevice ကိုနိုပ်ပြီး အခုနက save ထားတဲ့ code ကို ရေးလိုက်ပါ ခနစောင့်ပြီးပြန်တက်လာရ် အဲ့ gmail နဲ့ သင် coc ဆော့လို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ...
By Min Oaker at 10:08 PM